Bose waxay dacweysay Beats | Wararka IPhone
Shirkadda Mareykanka ee u heellan soo saaridda aaladaha la xiriira dhawaqa, Bose, ayaa dacwad rasmi ah ka gudbisay shirkadda Wuxuu ku garaacayaa Elektaroonigga by ku xad gudbaan dhowr shati la xiriira Tirtirida Buuq. Astaantan waxaa wadaaga labada shirkadood ee sameecadaha sameecadaha sameeya ee adduunka oo dhan caan ka ah. Hadda waa markiisii ​​shirkadda Beats, oo dhowr bilood ka hor jirtay helay Apple, Muuji inaadan 'koobiyeyn' nidaamka ay isticmaashay Bose si loo yareeyo buuqa jawiga marka lagu dhageysto muusikada dhagaha.
Gaar ahaan, Bose waxay muujineysaa in Beats wuxuu jabiyay 6 shati baajinta dhawaaqa, taas oo ay qiil uga dhigayaan markay ikhtiraaceen iyo ku hayso horumar sanado badan. Labada shirkadood ayaa in muddo ah isku dayayay inay ka heshiiyaan arrintan, laakiin markay ahayd iyadoo aan la gaari karin heshiis dhaqaale, Bosé wuxuu go'aansaday inuu sii wado dagaalladiisa oo uu dacwadda u gudbiyo maxkamadda. Wuxuu garaacayaa sameecadaha dhagaha ee u muuqda inay adeegsadaan isla nidaamka joojinta dhawaaqa dibada sida kan Bose waa Garaac Studio, nooc kasta oo ka mid ah noocyadeeda oo leh fiilo ama xarig wireless Bluetooth ah.
Arinta qosolka badan ee ku saabsan kiiska ayaa ah in dacwada la xareeyay kadib markii Apple ay heshay shirkada uu hogaamiyo Dr Dre. Waxaa macquul ah maadaama ay hadda hoosaad ka tahay shirkadda Cupertino, Bose isku day inaad hesho magdhow lacageed oo weyn ama dib u celin alaab kuwaas oo ku tartamaya iibinta kuwaaga oo adeegsanaya tikniyoolajiyaddan oo kale. Waxay u muuqataa in kiiskani uu dhowr cinwaan ka dhigi doono bilaha soo socda sababo la mid ah oo ay soo bandhigeyso kiisaska dacwadaha ee u dhexeeya Apple iyo Samsung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Bose waxay dacweysaa Beats oo ku xadgudubta shatiyada baajinta shatiga
Tani waa shirkadda ku qasbanaatay inay iibsato Apple, ma aha qashinqubka Beats!